Lubuntu 17.10 ichave neLXQT sedhisiki inoshanda | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki rino takadzidza kufambira mberi kutsva mukuvandudzwa kweshanduro inotevera yeUbuntu uye zvinwiwa zviri pamutemo. Shanduro inounza zvimwe zvitsva zvinozivikanwa sekubatanidzwa kweGnome seyakanyanya Ubuntu desktop. Asi zvichaunzawo zvimwe zvishoma zvinozivikanwa asi sekuchinja kwakakosha Imwe yeshanduko idzi ichave kusvika kweLXQT desktop muLubuntu 17.10.
Pakupedzisira, Lubuntu anoshandisa iyo LXQT desktop asi hachizove chinhu chakajairwa muLubuntu 17.10 vhezheni asi zvinotora mimwe mwedzi yakati wandei. Asi isu tichava nesarudzo yekusarudza seyakajairika desktop.
Lubuntu 17.10 icharega isu tichisarudza pakati peLXQT neLXDE, izvozvi
Iyo yazvino budiriro vhezheni yeLubuntu 17.10 ine iyo vhezheni LXQT 0.11, vhezheni iyo ichagadziriswa kune yekupedzisira vhezheni, kubvira LXQT vhezheni 0.12 inotarisirwa kuwanikwa panguva iyoyo. Mushandisi anozokwanisa kusarudza kuti ndeipi desktop yekushandisa, kungave kushandisa LXQT kana kana vachida, sarudza iyo yakasarudzika uye yakagadzikana LXDE. Pamusoro pekushandurwa kwedhesiki kana pane rusununguko rwekusarudza, Lubuntu 17.10 inoshandura media player, ichisiya Gnome Player uye ichitsiva neGnome MPV.
Kugoverwa kuchachinjawo maneja maneja, kusarudza dhcpcd kubata DHCP uye DHCPv6 vatengi. Izvi zvinokonzeresa kuti matambudziko mazhinji aripo ane chekuita nenetiweki agadziriswe zvishoma kana zvirinani zvinotarisirwa.
Iyo yekutanga vhezheni Lubuntu 17.10 alpha inotarisirwa kuburitswa kupera kwemwedzi uno, panosvika June 29. Nekudaro, isu tinogona kutoyedza izvo zvitsva zveiyo vhezheni, pamwe nekushanda kweLXQT nekuda kweiyo Ubuntu ISO chifananidzo chekuchengetedza. Mariri unogona kuwana yazvino vhezheni vhezheni yeLubuntu 17.10. Asi isu tinokurudzira kuti iwe ushandise chaiwo muchina weizvi, umo chero kukuvara kana kukanganisa kusinga kukanganisa timu yedu yekugadzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Lubuntu 17.10 ichave neLXQT sedesktop inoshanda